Website Qaado II
Website Cusub, Qaado II
Arbacada, Oktoobar 27, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Nick Carter
Waxaan saaka la yeeshay sheeko aad u wanaagsan Jeb laga bilaabo sanduuqa yar. (Taasi waa sax, waan ka xishooday. Haddii aadan aqoon cidda uu yahay Jeb, xaggee baad joogtay?) Weligaa xusuusnow xaqiiqda ah inaan si kama 'ah u dalbaday laba-toogasho, mana qaban karo weli gacmahayga hadda, Waan hubaa in waxa uu igu yidhi ay umuuqdeen kuwo qoto dheer hadaanay kafeynku kaxayn meel sare.
"Marka, waa kuwee macaamiishaadu bartilmaameedka?" Waxaan weydiiyay, anigoo filaya inaan maqlo warshadaha, cabbirka, iyo sharraxayaasha kale ee niche.
Waxaan nahay websaydh labaad oo shirkadeed. ” Jeb ayaa ii sheegay. Waa inay soo maraan hawshan ugu yaraan hal jeer oo hore.
Labaad? Ma wuxuu rabaa inuu raaco dabo-dabo kale? Mise kalsooni buu ku qabaa inuu wax ka sii fiican qaban doono, wuxuu doonayaa inuu bannaanka ka soo baxo tartanka. Midkoodna. Wuxuu kaliya jecel yahay inuu la shaqeeyo iibsade caqli badan. Macaamil garanaya waxa ay doonayaan, sababta ay u doonayaan, iyo wixii aan (iyo mucjisada u samayn) shaqeeyay markii ugu horreysay.
Marka horeba, hadaadan websaydh lahayn, mid iska tuur. Xaquuqda Jeb Waad ku qarashgareyn kartaa da 'ka talinta waxyaabaha aad ka kooban tahay, naqshadeyntaada, qaabeynta qaababkaaga, dhibcaha beddelka, iwm. Waxay ka dhigi laheyd hal heck oo ah kiis daraasad heer sare ah oo loogu talagalay mashruuca sare ee ardayda jaamacadda. Laakiin 3 bilood kadib, waxaad baran doontaa inaad khaldantay. Hadda, waad khaldami kartaa, ama waad yara khaldami kartaa. Laakiin waad khaldantahay.
Ha welwelin. Qalad noqoshada waa habka ugu dhaqsaha badan ee lagu saxo. Xitaa khabiirka wax soo saarka, Robby Slaughter, waxay dadka ku dhiirrigelisaa inay si wada-deggan u fashilmaan. Marka loo eego Jeb, mar haddii aad khaldantay – xitaa waxyar waad qaldantay – hadda wuu kula shaqeyn karaa. Hada runti wuu ku caawin karaa oo wuxuu hibada shirkadiisa u galin karaa sida ugu fiican ee ay kuugu adeegaan.
Hadda, aan dhahno waxaad horey u leedahay degel. Ma shaqeyneysaa? Ma u shaqeysaa sida aad u rabto? Maxaa diidaya in dib loo sameeyo?
Marar aad u badan, dadku waxay ula dhaqmaan shabakadaha sidii ay ula dhaqmeen dammaanad suuq maalmihii ka hor daabacaadda dhijitaalka ah. Marka hore ka dhig mid kaamil ah, maxaa yeelay kharash aad u badan ayaa ku kacaya si aad "midab u hesho" oo aad u baahan tahay inaad ku ordo 10k ama in ka badan oo ka mid ah goobahan si xitaa qiil loogu helo kharashka. Ka dibna, mar la daabaco, xitaa ha ka hadlin in la beddelo ugu yaraan hal sano ama ka badan. Iska iloow. Websaydhadu waa qashin bilaash ah oo dib loo sameeyo. Hagaag, runtii maahan bilaash. Laakiin tiknoolajiyada ayaa ka dhigaysa mid macquul ah in lagu sii wado qalabkan suuq geynta ah ee beta weligiis ah, weligaa ha ka baqin inaad dib u sameyso.
Khibrada waxbarasho ee soo saarista websaydhkaaga koowaad lama beddeli karo. Laakiin, waa sababtaas saxda ah in websaydhkaagu, u qaato II, uu u noqon doono barta run ahaantii isbeddel samaynaysa. Qaado 3, 4, iyo 5 kaliya way fiicnaan karaan. Laakiin waa inaad– WAA INAAD-aad marto habka aad u qaadato ka hor intaadan ku dhicin jaranjarada aad rabto. Diyaar, dab, ujeed. Ka dibna, ujeeddo mar labaad iyo mar labaad.
Waraaq Qaali ah John wuxuu ahaan lahaa Nice, Google!
Emailku Waa Dhintay? Ha u sheegin taas Jenni & Janneane
Waxoogaa Casaan ah oo Buluug ah
Oktoobar 27, 2010 at 9:57 AM
Waan jeclahay taatikada Jeb! Sida soo-saare softiweer, waxaan u arkaa inay tahay hab fiican oo lagu xardho macaamiisha doonaya inay dhisaan badeecad cusub oo software ah: horay mid ma u sameeyeen?
Waxaan ku jiraa freelancing xiriirka muddada-dheer. Taasi waa sababta aan u jeclahay inaan uga shaqeeyo webka, softiweerku marwalba wuu kobcayaa wuuna horumarinayaa. Softiweerku wuu sii fiicnaanayaa maaddaama xiriirkeenna (aniga iyo macaamiishaydu) korayo.
Oktoobar 27, 2010 at 8:01 PM
"Website-kaaga ma shaqeeyaa?" Waxaan ku doodi karaa in shirkadaha badankood aysan haysan wax tilmaam ah waxa “shaqeynta” dhab ahaan loola jeedo. Waa sababta aan ugu jirin ganacsiga websaydhka, waxaan ku jirnaa ganacsiga suuq geynta. Uma dhisno degello macaamiisha badankood… taas ayaa ugu wanaagsan dadyowga sida Jeb… laakiin haddii degelku yahay jidka u dhexeeya himilooyinka iyo macmiilkayaga, waxaan hubinnaa in waddada la jeexay oo ay diyaar u tahay inay socoto!
"Website-kaaga ma shaqeeyaa?" Waxaan ku doodi karaa in shirkadaha badankood aysan haysan wax tilmaam ah waxa “shaqeynta” dhab ahaan loola jeedo. Waa sababta aan ugu jirin ganacsiga websaydhka, waxaan ku jirnaa ganacsiga suuq geynta. Uma dhisno degello macaamiisha badankood… taas ayaa ugu wanaagsan dadyowga sida Jeb… laakiin haddii degelku yahay jidka u dhexeeya rajada iyo macmiilkayaga, waxaan hubinnaa in waddada la jeexay oo ay diyaar u tahay inay socoto!
Nov 5, 2010 saacadu markay tahay 4:46 PM
Waa run! Isku daygaagii ugu horreeyay wuxuu hubaa inuu xumaan doono.
Fred Brooks, oo ah qoraha buugga The Mythical Man-Month, ayaa yiri: “Qorsheyso inaad mid iska tuurto. Waad dooni doontaa, si kasta.